I-Spurs emqhudelwaneni wokufuna i-Premiership | Scrolla Izindaba
I-Spurs emqhudelwaneni wokufuna i-Premiership
I-Tottenham Hotspur iqhubekile nokukhuphuka kwayo ngokunqoba ekhaya ngamagoli amabili eqandeni ihlula i-Arsenal kwi-derby ebise-North London ngeSonto.
izinhloso zabo zicace: akukho okunye abakufunayo ngaphandle kokuwina i-English Premiership League, abagcina ukuyinqoba eminyakeni engama-59 edlule.
Kuthathe isihlabani saseNyakatho ne-Korea, uSon Heung-Min imizuzu eyi-13 ukuthola inethi futhi uphazamise izivakashi ekuqaleni komdlalo. I-The gunners ayikwazanga ukululama futhi ihlale ibukeka iphuma isibili.
Izinto ziye zaba zimbi kakhulu kuzivakashi ngaphambi nje kwekhefu. Bebekhululekile, bemukela ukuthi bazoba bashaya igoli.
Ukaputeni we-Spurs uHarry Kane kodwa wayeneminye imibono. Ubeke iqembu lakhe phambili kakhulu imizuzwana ngaphambi kwesiwombe sesibili sokunika i-Spurs ithuba lokuhola kahle.
Ngaphambi kwalo mdlalo uKane uqale kabi ngokungabaza ngenxa yokulimala. Lo mgadli ubesefomini enhle kakhulu ngaphansi kokuqeqeshwa nguJose Mourinho.
Ngaphambi kwale sizini uKane wabikwa ukuthi wayesendleleni yokuphuma ku-Spurs ngemuva kokuxabana noMourinho ngesizini edlule ne-Manchester United ne-Real Madrid belinde zikulindele ngabomvu ukumsayinisa. Ibhodi le-Spurs limqinisekisile ukuthi angahlala, futhi limenze waba yindoda entsha kule sizini.
Igoli lokuwina likaKane libonise i-Spurs iqinisa indawo yayo phezulu ku-EPL ngamaphuzu angama-24 emidlalweni eyi-11. I-Arsenal, nokho isalelwe wumsebenzi omningi okumele wenziwe uma ifuna ukuqeda kwabane abahamba phambili bese idlala ku-Uefa Champions League ngesizini ezayo.
Basalele emuva ngamaphuzu ayi-11 ku-Spurs futhi bahleli endaweni ye-15 ngemuva kokwehlulwa kwabo namuhla. Ngokuqondene nomqeqeshi wabo uMike Arteta, angahle aphume enkundleni yezemidlalo i-Emirates ngemuva kwalokhu kuhlulwa.
Eminye imiphumela ye-EPL
I-Sheffield United ihlulwe i-Leicester City ngamagoli amabili kwelilodwa; I-West Brom ihlulwe i-Crystal Palace ngamagoli amahlanu kwelilodwa; I-Liverpool ihlule i-Wolverhampton Wanderers ngamagoli amane eqandeni.
Umthombo wesithombe: @Tottenhamhotspur